जनयुद्ध स्वीकार्न तयार भएका ओली आज पेरिस डाँडामा किन गएन ? « Today Khabar
जनयुद्ध स्वीकार्न तयार भएका ओली आज पेरिस डाँडामा किन गएन ?
प्रकाशित १ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:३३
काठमाडौं, १ फागुन । माओवादीले मंगलबार देशभर २३ औं जनयुद्ध दिवस मनायो । यसैक्रममा पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रममा एमाले नेतालाई पनि निम्त्याइएको थियो, तर एमाले नेताले माओवादीको निम्तो मानेनन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा (बादल) लगायतको उपस्थिति थियो । देशका प्रमुख १० शहरमा वाइसीएलको पहलमा जनयुद्ध दिवस आयोजना गरिएको थियो ।
पेरिसडाँडामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले-माओवादी पार्टी एकताको सन्दर्भ निकाल्दै एमालेले जनयुद्ध स्वीकार गरेको बताए ।
तर, जनयुद्ध स्वीकार गर्न तयार भएको भनिएका एमालेका नेताहरु भने जनयुद्ध दिवसमा आयोजना गरिरहेको कार्यक्रममा देखिएनन् ।
जनयुद्ध दिवस मनाउन वाइसीएलले माघ १८ गते नै तयारी गरेको थियो । उक्त बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो दिने निर्णय समेत गरेको थियो ।
तर, विशेष कारणबस भन्दै कार्यक्रम आयोजक वाइसीएल नेपालले केपी ओलीलाई निमन्त्रणा गरेन । केपी ओलीको सट्टामा वाइसीएलले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई निमन्त्रणा पठायो । तर, मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा एमालेका कुनै नेता उपस्थित भएनन् ।
चिनियाँ राजदूत र प्रधानसेनापति थापाबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । काठमाण्डौँस्थित चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्की र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा भेटवार्ता गरेको छ ।
भोलि राजपाको संयोजक परिवर्तन हुदैंः महेन्द्रराय यादव संयोजक बन्ने
काठमाडौं । भोलि राजपा नेपालको संयोजक परिवर्तन हुने भएको छ । चक्रिय प्रणाली अनुसार भोली
झण्डै ७५ हजार कर्मचारीले अनलाइनमार्फत आफ्नो नाम दर्ता गराएका
माघ ३, काठमाण्डाै । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन झण्डै ७५ हजार कर्मचारीले
प्रदेश नम्बर पाँचको अस्थायी राजधानी रुपन्देहीबाट अन्यत्र सारे, सशक्त प्रतिरोध गर्ने :कांग्रेस
माघ ३, रुपन्देही । प्रदेश नम्बर पाँचको अस्थायी राजधानी रुपन्देहीबाट अन्यत्र सारे त्यसको सशक्त प्रतिरोध
कुरीति अन्त्य गर्ने सरकारकाे योजना अभियानका रुपमा अगाडि बढ्छ : मन्त्री थापा
माघ ३, काठमाण्डौ । संसदीय समितिले तत्काल छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति र त्यससम्बन्धी वातावरण बनाउन